बुनाई लामो नीरस सम्बन्ध, उपयुक्त मात्र "नीलो मोजा" र आफ्नो हजुरआमा छलफल गरिएको छ। बुनाइ यस प्रकारको निर्धक्क सबै दुनिया भर सोख र शिल्प को सूची मा अग्रणी स्थिति धारण। अब बुना गर्न सकिन्छ कपडे, कोट, आभूषण, जूता र पनि Swimwear: knitters को सिर्जनाहरू छैन केवल परम्परागत टाँसन वाला, मोजा र Mittens छन्।
धेरै केटीहरु जान्न गर्न प्रेरणा crocheted पोशाक आफ्नो चार-खुट्टे मित्र को संभावना छ।
न्यानो लुगा छैन स्टोर र skein, सरल गणना र सरल बुनाई योजना मा सस्तो धेरै पटक सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
पहिलो चरण: सुरुवात
जो उपयोगी सुझावहरू एक ढेर पाउन सक्नुहुन्छ बुनाई सिक्न इच्छा। धेरै महिला अनलाइन पत्रिका पृष्ठ फोटो, चित्र र एक उत्पादन को निर्माण को चरण विवरण द्वारा चरण भरिएका छन्।
सफलता बुनाई परियोजना को सिंहको शेयर - यार्न को सही चयनमा। यो आवश्यक छैन कि सिक्न र यो आउनेछन् बहस, सस्ता नमूनाहरू गर्न हतार छ। शब्द "यार्न गुणस्तर" यस्तो विशेषता मापदण्डहरू समावेश:
प्राकृतिक र कृत्रिम फाइबर प्रतिशत।
कोलोरेसन् र बनावट (एउटै लेबल संग coils मा thickening र raznotsvete यार्न को अभाव) को एकरूपता।
प्रयोग गुणस्तर प्राकृतिक सामाग्री (बोट र जनावर)।
तपाईं राम्रो यार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि सरल बुनाई योजना एक साँच्चै सार्थक कुरा सिर्जना गर्नेछ।
बुनाई सुई र बुनाई घनत्व
को spokes - अर्को चरणमा तपाईं सही उपकरण चयन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले खातामा उत्पादन को प्रकार लिएर तिनीहरूलाई बाँधिएका गर्न, र चयन गरिएको यार्न मोटाइ चयन गर्नुपर्छ। इष्टतम को रेशा जस्तै मोटाइ को spokes प्रयोग गर्न मानिन्छ (मिलिमिटरमा आकार लाइन गर्न लागू गरेर निर्धारण गर्न सकिँदैन)। को spokes को मोटाई, को प्याकेजिङ्ग मुद्रण निर्माता, यो मिलिमिटरमा मा सूचीबद्ध छ।
साथै, लगभग कुनै पनि skein को लेबल spokes को आकार सन्दर्भमा सिफारिसहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले आफ्नो हात मा सुई राख्न शिथिल प्रयोग प्राप्त नभएसम्म सबैभन्दा शुरुआती, अक्सर पनि कस बुनना। त्यसैले, यो सुई सिफारिसहरू निर्दिष्ट भन्दा अलिकति ठूलो कैलिबर चयन गर्न अर्थमा बनाउँछ, त्यसपछि त्यहाँ ठूलो हुनेछ र यो कपडा पाश बुनाई गर्दा बुनना गर्न सजिलो हुनेछ।
यी सुझावहरू निम्न र शुरुआती लागि सरल योजना बुनाई पाठ चयन गरेर, तपाईं राम्रो चाँडै ठोस परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सबै आवश्यक सामाग्री हुँदा, तपाईं आफ्नो बुनाई गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। पहिलो उत्पादन धेरै अनुभवी knitters यसको प्रत्यक्ष कपडा वाहेक / लूपहरूको को घटाउ संग जटिल गणना र manipulations आवश्यकता छैन रूपमा रूमाल छनौट गर्न सिफारिस गर्छौँ।
"बुनाई सुई को सरल योजना दुपट्टा" मा कोटी स्पष्ट मसूडों विभिन्न प्रकारका जीत। आफ्नो सार व्यक्तिगत र को संयोजन मा निहित backstitches लूपहरूको। यी तत्व अन्य ढाँचाको राम्रो किसिम।
1 (एक अगाडि पाश, एक गलत): सबै भन्दा साधारण ढाँचा गम 1 छ। तथापि, रूमाल पनि बाक्लो र कडा जाने सक्छन् सम्बन्धित, त्यसैले यसलाई गम2को संभावना विचार गर्न सबै भन्दा राम्रो छ:2वा अंग्रेजी (SC सहित)।
बुनाई योजना कसरी पढ्न कसरी सिक्न
बुनाई लागि ढाँचाहरू बुझ्न गाह्रो छैन। क्षेत्र मा, लेबल सेल, प्रत्येक पाश लागि निर्दिष्ट प्रतीक र प्रतीक तपाईं बुनना गर्न चाहन्छु। एक प्रतिमा एक वा बढी लूपहरूको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
केही वर्ण लगभग, पारंपरिक तिनीहरूले धेरै प्रकाशनहरू प्रयोग नै व्याख्या छन् बनेका छन्, अरूलाई व्यक्तिगत आविष्कार विकासकर्ता योजना हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, प्रतीक प्रत्येक डिकोड सर्किट गर्न अर्को प्रबन्ध मिलाए।
योजना निर्दिष्ट सुरु बुनाई निर्देशन र यसको तालमेल मा (प्रत्येक ढाँचा को तत्व दोहरो)। को रेखाचित्र को तेर्सो पङ्क्तिहरू बुना भयो कपडा पंक्ति अनुरूप। , सीमित छवि बुनाई मात्र अनौठो वा पङ्क्तिहरू एक अगाडि पक्ष बुनाई गठन लागि अक्सर सरल सर्किट ढाँचाहरू। अन्य पङ्क्तिहरू सबै लूपहरूको तिनीहरूले (अनुहार वा purl) हेर्न रूपमा provyazyvayut। तर ढाँचा निर्मित केही जटिल योजना कारण कपडा सबै पङ्क्ति काम हो।
एक रात मा दुपट्टा
देखिने परिणाम प्राप्त बुनाई प्रक्रिया गहिरो तल्लीन र चाँडै गर्न, यो एक भारी यार्न प्रयोग गर्न उचित छ। तपाईं एक वर्दी torsion संग एक चिकनी यार्न लिन वा छनोट अप "कल्पना" गर्न सक्नुहुन्छ - पातलो र व्यापक क्षेत्रमा। यो यार्न प्रयोग गर्दा पनि सरल बुनाई योजना चाँडै रोचक क्यानभास प्राप्त हुनेछ।
लागि बुना रूमाल चयन ढाँचा प्रयोग गरेर लम्बाइ गर्न लूपहरूको को गणना रकम र बुनना कपडे सङ्कलन गर्न आवश्यक हुनेछ।
एक मोडेल संग काम
लूपहरूको को नम्बर बुनना yarns को एक नमूना देखि गणना गर्न सकिन्छ निर्माण को लागि प्रयोग गर्न। लेबल बुनाई घनत्व को skein समावेश भने पनि यो आंकडा एकदम गलत छ। यसमा निर्भर:
बुनाई विशिष्ट मालिकको घनत्व;
चयन गरिएको सुई को प्रकार र आकार;
लागू गरिएको ढाँचा।
परिणामस्वरूप नमूना धोए गर्नुपर्छ र त्यसपछि पिन को तेर्सो सतहमा पिन सुत्छन्। यसरी, कपडा dries र समतल बस्न छैन। लुगा धुने गर्न वैकल्पिक एक भाप प्रभाव संग एक उमालेको फलाम हुन सक्छ, तर शुरुआती लागि, यो विधि किनभने धेरै nuances को सिफारिस गरिएको छैन।
ड्राई नमूना 10 सेमी (चौडाई र उचाई) र एक कपडा कति लूपहरूको हुनु पर्छ निर्धारण द्वारा लूपहरूको र पङ्क्तिहरू संख्या गणना मापन गरिएको छ।
प्रमुख गल्ती शुरुआती कसरी जोगिन
पनि ठूलो व्यास उपकरण, बाक्लो यार्न र सरल योजना बुनाई स्वतः रूमाल को कष्ट-मुक्त उत्पादन ग्यारेन्टी छैन। यी कारणहरूले निकै knitters काम सुविधा गर्न सक्छ, तर सफल नतिजा पनि ध्यान, धैर्य र लगनशील भई लागिरहेमा आवश्यक छ।
सबैभन्दा ठूलो परिश्रम आवश्यक छ कि पक्षहरू बीच, यो बतान गर्न सम्भव छ:
योजना गर्न सख्त अनुपालन (अनुमान र अवहेलना त्रुटि बिना)।
inaccuracies को सामयिक सुधार (blooming र लाउने)।
लूपहरूको को मूल नम्बर अनुपालन।
उत्पादन को छेउको सावधान डिजाइन।
सबै कपडा बुनाई मा नै घनत्व अनुपालन।
पहिलो र अन्तिम पङ्क्तिहरू को सौंदर्य उपस्थिति र अन्त्य tucked सूत्रहरू छोट्याउन।
उत्तरार्द्ध बिन्दु मा, फिलामेंट्स को सुझाव सर्वश्रेष्ठ ठूलो सुई को बुना कपडा भर्न छ। त्यसैले तिनीहरू पनि लुगा धुने पछि खडा छैन बाहिर।
बुनाई openwork ढाँचा
को बुनाई संसारमा Accustomed, तपाईं खुला-काम उत्पादनहरु बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। संभोग यस प्रकारको वेब प्वालहरू अस्तित्व presupposes। हामी कपास वा Viscose देखि गर्मी कुराहरू बारे कुरा गर्दै भने, openwork कपडा प्वालहरू को एक ठूलो संख्या को निर्वाचकगण, लगभग पारदर्शी हुन सक्छ।
यस लेखमा सिफारिसहरू शुरुआती गर्न सम्बोधन भएकोले एक सरल त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ openwork बुनाई। योजनाहरू जस्तै ढाँचाको आवश्यक SC समावेश गर्नुहोस्। व्युत्क्रम श्रृंखला मा बुनना, र तिनीहरूले बस openwork गठन। साथै, दुई लूपहरूको सँगै provyazyvayut जहाँ स्वागत, छ।
तपाईं जो Openwork केही तत्व संयोजनमा एक लगातार ढाँचा प्रस्ताव यस्तो योजनाहरु, बाहिर काम गर्न सक्छन्, त्यसपछि थप जटिल विकल्पहरू गर्ने उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
साथै बुनाई लागि ठोस, सरल openwork ढाँचाको रूपमा, चित्र र वर्णन रिपोर्ट र दोहोरिने तत्व हो। provyazyvaniya धेरै पङ्क्तिहरू पछि Mistress यी तत्व र लगभग स्वतः दिइनेछ अल्गोरिदम बिर्सनुहुन्न।
समाप्त उत्पादन लुपमा को गणना को लागि एक मोडेल जस्तै तरिकामा उपचार गर्नुपर्छ (धुने, भोकमरी र विघटित)। यी घटनाहरू पङ्क्तिबद्ध संभोग पछि, कुरा नरम हुन्छ र इच्छित आकार प्राप्त।
हृदय देखि उपहार
यार्न, उपकरण र मोडेल भविष्य उत्पादनहरु को बुनाई को सरल योजना एक अद्वितीय उत्पादन मनपर्ने को knitter गरेको दराज को "हाइलाइट" हुनेछ भनी सिर्जना गर्नेछ चयन कारण ध्यान संग। साथै, शिल्प को लोकप्रियता हात द्वारा उपहार को जोडी मूल्य दिन्छ। त्यसैले, पनि बुनाई मा न्यूनतम अनुभव, तपाईं परिवार, साथी वा प्रियजनहरूको लागि उत्कृष्ट उपहार बनाउन सक्छ।
विशेष stretching परहेज, न्यानो (तातो छैन) पानी मा हालतमा तेर्सो स्थिति सुकेको संग कोमल लुगा धुने: बुना उत्पादन हात द्वारा को प्रकार को बिना विशिष्ट हेरविचार चाहिन्छ। यी आवश्यकताहरूको अनुपालन एकदम बुना वस्तुहरूको सेवा जीवन वृद्धि हुनेछ।
किशोर लागि ड्रेस: चयन विशेषताहरु
इस्टर टोकरी। कसरी इकट्ठा गर्न र यसलाई सजाउनु?
बुनाई गलत पाश
फेसबुक को संस्थापक: एक करोडपति, philanthropist, एक प्रतिभा
अभिनेता Alexei Mironov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
कसरी जाडो लागि नरक राख्न? बचत को कस्ता तरिकाहरू प्रभावकारी छन्?
म दाहिने हात Numb छु। कारण?
हाइड: Mundo - जंगल, माथि लाइन, क्षमता, विधानसभा
टर्की वायु सेना: संरचना, संख्या, फोटो। रूस र टर्की को वायु सेना को तुलना। द्वितीय विश्व युद्ध मा टर्की वायु सेना